लिमीमा पुगेन आयोडिनयुक्त नुन- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
लिमीमा पुगेन आयोडिनयुक्त नुन
असार १४, २०७७ छपाल लामा
हुम्ला — ढुवानी अनुदानको आयोडिनयुक्त नुन गाउँमा नपुग्दा नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमीका बासिन्दा अझै ढिके नुनको भरमा छन् ।
सरकारले १५ वर्षदेखि ढुवानी अनुदानमा हुम्लामा आयोडिनयुक्त नुन पठाइरहेको छ । तर डिपो सदरमुकाममै सीमित हुँदा लिमीबासी आयोडिनयुक्त नुनबाट वञ्चित छन् ।
आयोडिनयुक्त नुनको अभावमा अधिकांश महिला र बालबालिका वर्षौदेखि कुपोषणको शिकार बनेको वडाध्यक्ष पाल्जोर लामाले बताए । ‘सदरमुकाममा बर्सेनि सयौं क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन आउँछ,’ उनले भने, ‘तर हामीले कहिल्यै त्यो नुन खान पाएनौं ।’ उनले ढुवानी समस्याका कारण गाउँबासी ढिके नुनको भरमा रहेको बताए ।
लिमीमा तिल, हल्जी र जाङ गरी ३ बस्ती छन् । जहाँ झन्डै १ हजार घरधुरीको बसोबास छ । लामो समयदेखि चिनियाँ बजारबाट खरिद गरिएको ढिके नुन उपभोग गर्दै आएको हल्जीका खेनराब लामाले बताए । उनका अनुसार लिमीबाट सदरमुकाम आउजाउ गर्न दुई साता लाग्छ । ‘धेरैजसोलाई आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानै छैन,’ उनले भने, ‘वर्षमा एकपल्ट लाग्ने तिब्बती हाटबजारबाट नुन खरिद गरी वर्षभरि पुर्‍याइरहेका छौं ।’ आयोडिनको अभावमा थाइराइड, गलगाँड आउनेलगायत स्वास्थ्यसमस्या देखिने जिल्ला अस्पतालका डा. टसिआङ्जुक लामाले बताए ।
प्रकाशित : असार १४, २०७७ १३:५४
असार १४, २०७७ राजबहादुर शाही
मुगु — लकडाउनकै बीच डा. गोविन्द केसीले हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका छन् । शिविरमा झन्डै डेढ सय बिरामीको उपचार गरिएको छ ।
केसी हिँडेरै ताजाकोट पुगेका हुन् । सुदूरपश्चिमको दार्चुला, डडेल्धुरा, बाजुरा हुँदै उनी हुम्ला पुगेका थिए । सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्थानीयलाई हाडजोर्नीसम्बन्धी उपचार प्रदान गरेको केसीले बताए ।
ताजाकोट गाउँपालिकाको महिला स्वास्थ्य केन्द्रमा आयोजित शिविरमा बिरामीलाई निःशुल्क औषधिसमेत वितरण गरिएको थियो । गाउँमै डाक्टर पुगेपछि विपन्न बिरामीले वर्षौपछि उपचार पाएको गाउँपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले बताए ।
प्रकाशित : असार १४, २०७७ १३:४३